Balaji Telefilms သည် Xstream နှင့် Diagnal ကိုရွေးချယ်ပြီး၎င်း၏ Global OTT ဖျော်ဖြေရေး ၀ န်ဆောင်မှု ALT Balaji ကိုစက်မျိုးစုံဖြင့် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Balaji Telefilms selection Xstream နှင့် Diagnal မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်း၏ဂလိုဘယ် OTT Entertainment ကဝန်ဆောင်မှု, ALT Balaji, ပါဝါမှ
မွမ်ဘိုင်း, အိန္ဒိယ, ဟောင်ကောင်နှင့်ကိုပင်ဟေဂင်, ဒိန်းမတ် - ဖေဖော်ဝါရီလ 29th, 2016 - Balaji Telefilms, အိန္ဒိယ၏အကြီးဆုံး TV နဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုယနေ့ powering အဘို့, Xstream, OTT ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူနှင့် Diagnal, အာရှရဲ့ဒေသဆိုင်ရာ OTT အထူးကုနှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၎င်း၏လာမည့် OTT ဖျော်ဖြေရေးဝန်ဆောင်မှု, ALT Balaji ။ Xstream ၏ cloud-based ကိုဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, Xstream MediaMaker ™, ALT Balaji ရဲ့ multiscreen ဖြေရှင်းချက် ALT Balaji နှင့် Diagnal Front-အဆုံးဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေး, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုဖြေရှင်းချက်များနှင့်စနစ်များကိုပေါင်းစပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်လောင်စာပါလိမ့်မယ်။
2015 အတွက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, ALT Balaji ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည် Balaji Group မှOn-demand ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းရန်၎င်း၏ဖန်တီးမှုကျွမ်းကျင်မှုတိုးချဲ့ဖို့ 's မဟာဗျူဟာမြောက်ရည်ရွယ်ချက်, တကမ္ဘာလုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပရိတ်သတ်များအတွက်မူရင်းနှင့်သီးသန့်အကြောင်းအရာ။ ဒီပလက်ဖောင်းမှတဆင့်သူတို့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်တွေ၏ပြောင်းလဲနေတဲ့ဖျော်ဖြေရေးစားသုံးမှုအလေ့အထမှဖြည့်တင်းကူညီပေးပါမည်။
"ALT Balaji က၎င်း၏ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်မှုပုံပြင်များခံစားရန်လိုလားနှင့်နည်းပညာဟာသူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံအတွက်ထိ မိ. လဲစရာဖြစ်ချင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့နည်းပညာတစ်ခုပေးရန်နှင့်စားသုံးသူမှမမြင်ရတဲ့င်လျှင်ကျွန်တော်တစ်ဦးအကြီးအလုပ်ပွုပါပွီဟုယုံကြည်ကြသည်, "Sunil Nair, Chief Operating Officer, ALT ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Entertainment က, Ltd. " ဟုXstream ကြှနျုပျတို့ကိုဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းအတွက်ချောမွေ့စွာချောမွေ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့ခွင့်ပြုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီဖြေရှင်းချက်ပေးသည်။ သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံ၏အသိပညာ၏အတိမ်အနက်ကိုပေါင်းစပ် Diagnal အဖွဲ့အလွန်လျင်မြန်စွာတစ်အလွပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ "
Xstream ရဲ့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အရွယ်မှာပလက်ဖောင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ် "Diagnal ရဲ့သက်သေပြချက်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ဝေစွမ်းရည်, High-end စီမံခန့်ခွဲသူတို့၏အထင်ကြီးတွင် track record, စိတ်ကြိုက်အင်တာနက်ကဗီဒီယိုကန်ဆောင်မှုများ, သက်သေနည်းပညာနှင့်အဖြေတစ်ခုမိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်စျယောကျစီနိုင်စွမ်းအမှန်တကယ်အနေဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကသူတို့ကိုသတ်မှတ် အခြားသူတွေနဲ့သူတို့ကိုသဘာဝမိတ်ဖက်များနှင့်ငါတို့အဘို့အပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နှင့် Diagnal နှင့် Xstream ကျွန်တော်အမှန်ရှုပ်ထွေး OTT ဂေဟစနစ်နားလည်သောသူမိတ်ဖက်ရရှိခဲ့ပြီးပြီကျနော်တို့အနာဂတ်-အထောက်အထားဖြေရှင်းချက်ကိုတည်ဆောက်လေပြီ။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးအလျင်အမြန်ဖြစ်ပေါ်နေသောစျေးကွက်အတွက်ရှေ့ဆက်အဖြစ်နှင့်အတူကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သောမျိုးစုံပစ္စည်းတွေပေါ်မှာငါတို့လာမယ့်မျိုးဆက် OTT ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ပလက်ဖောင်းတည်ဆောက်ရန်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ပါတယ်။ "Ashish Bhansali, ကုန်ပစ္စည်း၏ဦးခေါင်းဖြည့်စွက်, ALT ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Entertainment က, Ltdဒီနွေရာသီ .Launching, ALT Balaji အိန္ဒိယအတွက်ပရိသတ်ကိုနှင့်ပြည်ပမှာအမျိုးမျိုးသော devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတစ်ခုပျော်စရာအတွေ့အကြုံကကမ်းလှမ်းရန် Xstream MediaMaker ™နှင့် Diagnal ရဲ့ကြံ့ခိုင်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချပါလိမ့်မယ်။
Xstream MediaMaker ™ သက်သေကအင်တာနက် TV ကိုဖြေရှင်းချက်မျိုးစုံ devices- အပေါ်ဘာသာစကားမျိုးစုံ & ငွေကြေးနှင့်အတူဒေသများနှင့်တိုင်းပြည်များအနှံ့ future-, ချောမွေ့စွာကိုဖန်တီးရန်အော်ပရေတာ, ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာပိုင်ရှင်များကို enable စီမံခန့်ခွဲ, ကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းနှင့်ငွေရရှိအောင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရှုပ်ထွေး simplifying management- တစ်ခုလွယ်ကူပြီးပွင့်လင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူအားလုံး အင်တာနက်ကတီဗီထဲမှာနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကို၎င်းတို့၏အမာခံစီးပွားရေး, မဟုတ် OTT အတွက်ရှုပ်ထွေးအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြု။
"အိန္ဒိယအတွက်ရှေ့ဆောင်စတူဒီယိုအဖြစ်, Balaji ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာနှင့်အတူရှေ့ဆက်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမောင်းနှင်ရန်ဆက်လက်။ "ရှိမုနျကို Hoegsbro, Xstream မှာ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျနော်တို့က multiscreen ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်နဲ့ subscriber များအားပါဝငျနှင့်မှေ့လျြောအခြားဆန်းသစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်န်ဆောင်မှုများဖြန့်ဝေဘို့ငါတို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သက်သေပြချက်များနှင့်အရွယ်မှာ cloud- based OTT ပလက်ဖောင်းနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာအတွက်သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ALT Balaji တိုက်ရိုက်-to-စားသုံးသူ OTT န်ဆောင်မှုအတွက်စစ်မှန်သောဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့သည်ကြီးစွာသောသာဓကတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်တော်အတူတူအလုပ်လုပ်ခံရဖို့ဝမ်းသာပါ။ "
"ကျနော်တို့က ALT Balaji, Xstream နှင့် Diagnal အကြားမိတ်ဖက်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်အရာကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကိုဂုဏ်ယူနေ - အိန္ဒိယစျေးကွက်၏အကြောင်းအရာလိုအပ်ချက်သင့်တော်ပါတယ်နှင့်လည်းသုံးစွဲဖို့တစ်ပျော်မွေ့သောကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမီ OTT ထုတ်ကုန်" ရုဗင်အမျိုး Verghese, CEO ဖြစ်သူကပြောသည် Diagnal
အဆိုပါ ALT Balaji Xstream နေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အဝ cloud- အမေဇုံက Web Services ကကို အသုံးပြု. အခြေခံသည်။ AWS, Xstream အသုံးပြုခြင်း ALT Balaji စာရင်းသွင်းသူတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးပေးပို့သေချာစေရန်မတူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုနှင့်သက်တမ်းမကယ်မလွှတ်နိုင်။ EC2 Xstream နှင့်အတူ API ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည် facing န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ S3 ထို့နောက် Cloudfront သုံးပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သောအကြောင်းအရာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကြံ့ခိုင်သိမ်းဆည်းခြင်း, များအတွက်အသုံးပြုသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ RDS နှင့် Redshift metadata ကိုနှင့်စာရင်းဇယားများအတွက်အသုံး databases ကိုဖြစ်ကြသည်။ Xstream တစ်ဦးကို Amazon Web Services အဆင့်မြင့်နည်းပညာ Partner ဖြစ်ရန်ဂုဏ်ယူသည်။
ALT Balaji မတူနိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ AWS သုံးပြီး Xstream MediaMaker ™စွမ်းအားဖြင့် Balaji Telefilms ပေးအနေနဲ့သီးသန့် OTT ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်
မူလတန်း differential ဖြစ်ခြင်းမူရင်းနှင့်သီးသန့်အကြောင်းအရာနှင့်တစ်ဦးက subscription ကိုအခြေပြုဗီဒီယို-on-Demand ဝန်ဆောင်မှု
Q2 2016 အတွက်စတင်။ ချိတ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြတ်ပြီးမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
NAB မှာတွေ့ဆုံ Xstream
Xstream NAB မှာပြနှင့်သူတို့၏တဲအားဖြင့် drop မှဧည့်သည်များကကြိုဆိုပါလိမ့်မည် #SU9107CMနှင့်ဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, Xstream MediaMaker ™, ALT Balaji နဲ့တူန်ဆောင်မှုများနောက်ကွယ်တွင်အင်ဂျင်တစ်ခုသရုပ်ပြရ။
Brynhild Vinskei အားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Balaji Telefilms selection Xstream နှင့် Diagnal မျိုးစုံကိရိယာများပေါ်တွင်၎င်း၏ဂလိုဘယ် OTT Entertainment ကဝန်ဆောင်မှု, ALT Balaji, ပါဝါမှ - ဖေဖေါ်ဝါရီလ 29, 2016
ALT Balaji Balaji Telefilms အင်တာနက်ကို TV က isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော OTT OTT နဲ့ multi-platform ကိုန်ဆောင်မှုများ OTT တီဗီ OTT ဗွီဒီယို SVOD နေရာတိုင်းမှာတီဗီ XStream Xstream MediaMaker 2016-02-29
ယခင်: နွေရာသီ International - ဓါတ်ပုံ
နောက်တစ်ခု: LED ကိုတူရိယာနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုထုတ်လွှင့်စတူဒီယို်လင်းဖို့ကိုဘယ်လို